२० बर्षकि अप्सरा जस्ती श्रीमतिलाई यस्तो गरे (भिडियो)
तिम्रो आँखाको भाकामा म्यूजिक भिडियो डिजिटल प्लेटफर्ममा सार्वजनिक
सज्जा चौलागाईँ बनिन् नेपाल आइडल सिजन –३ को बिजेता
गजलः क्षितिजको तल एउटा सानो टार छ - चुडामणी दहाल
मुक्तकः रुदा बग्ने आँसु होईन - सुधा शाह
कविता : म कहाँ एक्लै छु र ? - शरण राई
काठमाडौं । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन ४६ औं राष्ट्रपति हुने निश्चित भएको छ । आगामी जनवरी २० मा अमेरिकी संविधान अनुसार बाइडनले राष्ट्रपति पदको सपथ लिने छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा के प्रभाव पार्ला ? यतिखेर सर्वत्र चासो छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन आउने छैन । तर, नयाँ प्रशासनका केही नयाँ प्राथमिकता र अहिलेकै विषयमा केही नयाँ ‘एप्रोच’ भने देखिन सक्छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार बाइडन आएपछि उनले उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, आर्थिक उदारवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा जोड दिने छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया र अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा बाइडनले यी मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछन् ।
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘ट्रम्प प्रशासन विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका एजेन्सीमाथि त्यति उदार देखिएको थिएन । कतिपय अवस्थामा त सहयोग रोक्ने र कटौती गर्नेसम्म भयो । त्यसको परोक्ष प्रभाव हामीजस्ता विकासोन्मुख देशलाई परिरहेको हुन्छ । उनले अब बाइडन प्रशासन यस्तो मामिलामा ट्रम्प प्रशासन भन्दा उदार हुने अनुमान रहेको बताए ।
त्यसैले बाइडनले यस सम्बन्धमा लिने नीतिलाई पनि अमेरिकाले निकै नजिकबाट हेर्नेछ । अर्काेतर्फ नयाँ प्रशासनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई टेवा दिँदा ती निकायहरुसँग नेपालले गर्ने सहकार्य पनि वृद्धि हुन सक्छ । त्यसैगरी थप अमेरिकी लगानी ल्याउने वातावरण समेत बन्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
आइतबार तोलामा रु दुई हजार ३०० ले ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज पुनः रु ८०० ले घटेको छ
हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सामा चिसोले पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ
आईतबार हतियार सहित कञ्चनपुरको दक्षिणी सीमा क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका १० भुडा पुगेका भारतीय एसएसबी माफी माग्दै फर्किएका छन् । पटक पटक नेपाली भूमिमा हतियार सहित प्रवेश गर्न पल्केका भारतीय एसएसबीलाई स्थानीयले लखेटेपछि माफीमाग्दै फर्कीएका हुन् ।
पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका ९ जनाको रामनदी धाम (राम्दी) मा बिहीबार साँझ सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ